ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): ပြည်ပရောက် မျိုးချစ်မြန်မာများ၏ပန်ကြားချက်
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မှီတင်း နေထိုင်ကြသော တိုင်းရင်းသား ပြည်သူလူထုကြီးနှင့်တကွ ဌာနဆိုင်ရာ ၀န်ထမ်းများ၊ ဒီမိုကရေစီ လိုလားသော မျိုးချစ်စိတ်ရှိသည့် တပ်မတော်သားများ၊ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ ရဟန်းသံဃာတော်များ၊ ဘာသာရေး အသင်းအဖွဲ့များ အားလုံးသို့ ပြည်ပရောက် မျိုးချစ်မြန်မာများ (OBP) မှ “ နှစ်သစ် ကူးပြောင်းရာ အခါသမယတွင် ဘေးရန် ကင်းငြိမ်းလျှက် ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ချမ်းသာစွာဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံသစ်ဆီသို့ စိတ်တူကိုယ်တူ ပြောင်းလဲနိုင်ပါစေ ” ဟု ဆုမွန် ပြုအပ်ပါသည်။ ထိုသို့ ပြောင်းလဲရန်မှာလည်း မိမိတို့ အားလုံး၏ တာဝန်ပင် ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူ၍ အားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင် တိုက်ပွဲဝင်ကြပါရန် နှင့် မကြာမီ ကျင်းပတော့မည့် လူထုဆန္ဒခံယူပွဲအတွက် အောက်ပါအတိုင်း အထူး နှိုးဆော် ပန်ကြားအပ်ပါသည်။
မိမိတို့၏ ရင်ထဲမှ ဆန္ဒအမှန်တရားများကို လာမည့် မေလ (၁၀) ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ကျင်းပမည့် လူထုဆန္ဒခံယူပွဲ၌် ရဲဝင့် ပြတ်သားစွာ ကန့်ကွက် ဆန္ဒမဲပေး၍ ထုတ်ဖေါ်ကြရန်။
အကြောက်တရားများ ဖုံးလွှမ်းနေသောစိတ၊် လက်ရှိ ရရှိထားသော ရာထူး၊ စည်းစိမ်များ ဆုံးရှုံးမည့် စိုးရိမ်စိတ်ဖြင့် ထောက်ခံမဲ (Yes) ပေးရန် စဉ်းစားနေကြသော တပ်မတော်သားများ၊ ဌာနဆိုင်ရာ ၀န်ထမ်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံမှ လူမျိုးစုများသည် သာသနာ့ဥသျှောင် ပဓာနာစေရ မန္တလေး မစိုးရိမ်ကျောင်းတိုက် ဆရာတော်ကြီး ဦးကောဝိဒါ ဘိဝံသ ဟောကြားချက်အတိုင်း “ စစ်အစိုးရ ရေးဆွဲသော ဥပဒေကို ထောက်ခံမဲ ထည့်လျှင် ထိုစစ်အစိုးရ လွန်ကျူးခဲ့သော အကုသိုလ် အပြစ်အတိုင်း ထောက်ခံမဲ ထည့်သူတိုင်းလည်း ပြန်လည် အပြစ် ခံစားရမည် ” ဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ မဟုတ်ကြတော့ပဲ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိများ ဖြစ်ကြမည့်အရေး မိမိကိုမိမိ ဆင်ခြင်ကာ ထောက်ခံမဲ (Yes) ပေးမည့်အကြံကို ဖျက်၍ ကန့်ကွက်မဲ (No) ပေးရန် နှင့် လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ပါက သွားရောက် ထောက်ခံမဲ မပေးကြရန်။
မဲပေးမည့်သူအားလုံးသည် ကန့်ကွက်မဲ (No) သာလျှင် ဖြစ်စေရန်။
စစ်အစိုးရ တစ်ဖက်သတ် ရေးဆွဲထားသော ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ မူကြမ်းသည် မြန်မာပြည်သူ တစ်ရပ်လုံးအား တရားဝင် စစ်ကျွန် (ဖက်ဆစ်ကျွန်) ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ရေးဆွဲထားသော ဥပဒေဖြစ်၍ အတည်ပြုပြီးပါက ထိုဥပဒေကို ပြန်လည် ပြင်ဆင်ရန်မှာ အင်္ဂလိပ်လက်အောက်၊ ဂျပန်လက်အောက်မှ လွတ်မြောက်ရန် ကြိုးစားအားထုတ်မူထက် ပိုမို ခက်ခဲမည် ဖြစ်၍ ဤလူထုဆန္ဒခံယူပွဲကို ကန့်ကွက်မဲ (No) ပေးပြီး ဖျက်ဆီးပစ်ရန် လေးနက်စွာ ပန်ကြားအပ်ပါသည်။
No ပေးမည့်သူများ ……………. မျိုးချစ်ပြည်သူများ
Yes ပေးမည့်သူများ ……………. မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိများ
No ပေးမည့်သူ ……………. ဒို့ပြည်သူ
Yes ပေးမည့်သူ ……………. ဒို့ရန်သူ
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 11:41 PM
မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါ မလင်းလက်။ တမိသားစုလုံး ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
ဒုတိယအကြိမ် ပူးပေါင်းပါဝင် ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ကြရန် ဖိတ်...
ရဲရဲတောက် NO ကန့်ကွက်မဲများနှင့် ဧပရယ်လ်၂၇ မှတ်တမ်...
ခြင်္သေ့ကျွန်းမှ ကြက်ခြေခတ်ကန့်ကွက်မဲများ၏ ဧပရယ်လ်၂၆...
ခြင်္သေ့ကျွန်းပေါ်မှ ၂၇ ရက်နေ့ တညီတညွတ်တည်း ကန့်ကွက်မ...
လတ်တလောမှ ရောက်လာသူမြန်မာတစ်ဦးနှင့် ခြင်္သေ့ကျွန်းေ...
ခြင်္သေ့ကျွန်းမှ သံရုံးနှင့် သိကောင်းစရာ
စင်္ကာပူက ကန့်ကွက်မဲ စည်းရုံးရေး မူကြမ်းစာအုပ် (၈) အ...
အာဟာရစာစောင်မှမိတ်ဆွေများသို့ .. ကျေးဇူးတင်လွှာ
စင်္ကာပူနိုင်ငံမြန်မာသံရုံးမှာကပ်ထားတဲ့ "စာ" ၊ သံအမတ...
ခြင်္သေ့ကျွန်းမှ တံဆိပ်ခေါင်းများနှင့် ကြက်ခြေခတ်မျာ...
Looming "Vote No" messages in Little Myanmar Islan...
စစ်ကျွန်ဘ၀ မရောက်ချင်သူမှန်သမျှ သံရုံးမှာ ကန့်ကွက်...
စင်ကာပူကျွန်းပေါ်က Little Myanmar မြန်မာနိုင်ငံငယ်...
မဲပြားပေါ်က ကြက်ခြေခတ်.. ပြည်သူ့အောင်ပွဲမှတ်..မြန်မ...
စာရေးဆရာမကြီး အဖွားလူထုဒေါ်အမာ ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ...
ကန့်ကွက်မဲထည့်ရန် နှိုးဆော်ချက် .. လက်ကမ်းစာစောင်